Vabereki Vane Vana Vane "Autism" Votarisana neMatambudziko Makukutu
Vabereki vevana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo kana kuti vane "autism" vanoti vatarisana nedambudziko guru pakuriritira vana ava.
Vanoti hupenyu hwavo hwakaomarara nepamusana pekuti vana vane autism havakwanisi kuita zvinhu zvinoitwa nevamwe vechidiki kana kushamwaridzana navo.
Baba Luke Pencil veku Malbereign muHarare vane mwana wavo ane makore gumi ane autism. Baba Pencil, avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vanoti dambudziko guru rinosangana nevabereki ava nderekushaya ruzivo pamusoro pe autism.
“Izvi hazvina kunge zvabatwa nana chiremba kunyange mwana akarwara kwenguva refu ndichienda kunana chiremba vakasiyana siyana nekunana mukoti vakasiyana siyana.” Vanoenderera mberi vachiti, “Pakashayikwa kana mumwechete akatibatsira chaizvo kuti mwana wenyu condition yake inonzi autism. Aiti akachema zvainzi ah, baba hamuzivi mwana anongochema, zvinoreva kuti haasi kunzwa zvakanaka kana kuti muri kumuitira zvaasingadi. Asi uchiedza kutsanangura kuti aiwa, mwana uyu pane zvaanoita zvandisinganzwisise zvakafanana nekuti dzimwe nguva anoramba kupfeka bhutsu, dzimwe nguva anoramba kugerwa musoro.”
Baba Pencil vanoti vabereki vakawanda vanokatyamadzwa nekugumbuka zvikuru pavanoona kuti mwana wavo ari kukura zvakasiyana nevamwe vana. Vanoti ivo vakaita mhanza yekukurumidza kuziva zvaiitika kumwana wavo.
“Vana ava vanenge vane ma censory issues anenge akavhiringika, haana kuita seevamwe vana. Saka kana achigerwa ane zvaanonzwa zvisinganzwiwi nevamwe vana vose saka achiita muitiro waanoita iwowo.” Vatiwo, “ Saka izvozvo ndizvo zvakaita kuti tinzwisise kuti ho mwana wedu condition yaaninayo inonzi autism. Izvozvo ndinoda kuti nditsinhire kuti izvi handina kuzviwana kunana chiremba kana kunana mukoti. Ndakatozvinzwawo kune mumwe mubereki akanga ari affected, akatoenda pa radio akanotaura. Ndopatazowana information yakadaro.”
Baba Pencil vanoti murume nemudzimai vanofanira kubatana kwete kunongedzerana kana mwana asangana nedambudziko.
“Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti kuti mwana wedu aite zviri nani, tikwanise kumumaneja, regai tinorisecha.” Vatizve, “ Tikabva taenda pa internet. Iripo information pa internet. Ukaiwana zvinoita kuti umaneje mwana wako zviri nani. Zvinoita kuti kuwadzana kwako naye kuve kuri nani, kuwadzana kwake nenharaunda yakamukomberedza kuve nani.”
Amai Emma Muchefa avo vane mwana ane autism, vanoshandira hurumende vari pa Domboshava training centre. Vanoti madzimai mazhinji ane vana vane autism anoshungurudzika zvikuru.
“Vazhinji vana baba vanotiza, uye hama hadzizvitambiri. Kazhinji burden inosiyirwa amai, seni as a mother of three, two vari disabled murume akabva aenda ndikasara ndiri a single mother.” Amai Muchefa vatizve, “ Saka dambudziko rinenge rave rekuti unenge uchida kuenda kubasa, uri kuda ku physio nemwana iyeye, uri kuda zvekudya uri kuda zvekupfeka zvevana ivavo, uri kuda medication. Saka kazhinji kacho uri kuda zvekufambisa, hauna kana motor kana wheel-chair.”
Amai Tendai Kamutero veku Domboshava vane mwana wavo ane autism. Vakatozozviziva mwana uyu ave nemakore matatu kuti ndizvo zvaari.
Amai Kamutero vanoti kuriritira mwana uyu zvinovanetsa semunhu ari pamushando.
“Pandinoenda kubasa, munhu anosara naye haanzwisisi zvaanoda nekuti haatauri.” Vatizve, “Sign language haaizivi, haakwanisi ku communicator naye. Asi iye takatozomudzidza kuti kana ave nenzara kana chikafu chiri paanosvikira anotora ega. Kana kuti ukaona akukudhonza, isaini yekuti ane nzara.”
Amai Constance Mandishona vane vana vana, uye vaviri vavo vakaremara. Amai Mandishona, avo vanoshanda muhurumende vakapihwa imba yekugara kuMufakose mushure mekunge vakuru vavo vaona kutambura kwavaiita.
Vanoti vakaremara vanofanira kusimudzirana. “Ipapo ndisati ndapihwa imba ndakanga ndisina pfungwa dzekuti I can advocate kana kumiririrawo kana kutsigira munhu akaremara.”
Amai Mandishona vanoenderera mberi vachiti, “Ndakazogara pasi ndikazvibvunza kuti, hongu ndamiririrwa, ko vari kunze uko vasina anovamiririrawo tochiita sei? Nekuti inini pandakabatsirwa nemba, Permanent secretary mai Nhekairo vakandiudza kuti, Cony, dai vana vako wanga wakavachengetesa kumaraini, vachiita kunge musara pavana, I wasn’t going to assist you. But pese patinotaura unotungamidza vana vako kumberi kuti ma’am vangu vazodai nekuti hauna kunyara navo saka tazokudai. Ndakakwanisa kubatsira vamwe vabereki vairi. Mumwe wacho anonzi mai Boora anoshanda ku President’s department. Ane mwana wakewo ane autism. Ndikamuti akoma nyaya yangu yakamira yakadai, inini ndakawanawo imba. Imimi can you not write a letter mukwanisewo kuti mubatsirwe? Vakapihwa flat ku Ardbennie.”
Dr Cotilda Mangoma mugari wemuHarare uye vanofamba vachipa dzidziso pamusoro pe autism. Vanoti vabereki vevana vakadai vanofanira kushingaira kutsvaga ruzivo kuitira kuti vana vavo vave nepundutso.
“Inini ndiri kuona kuti zvakakosha kuve neruzivo mukati memhuri nemhaka yekuti chinhu chawave kuziva unoziva kuti unochibata sei, unochibata nemutoo upi.”
Dr Mangoma vanotizve, “Saka ini ndinoti vana baba nana mai vane vana vavasinganzwisisi kuti ingave autism here kana kwete zviri nani vatsvake rubatsiro kubva ku clinic level. Kana vabva ikoko voudzwa kuti enda ku rehabilitation. Rehabilitation yoferefeta kuti itype ipi ye autism, pamusana pekuti akasiyana siyana, akawanda. Nekuonekwa kunoita mwana, nemaitiro ake unobva waudzwa kuti aiwa ichi ndechakati, then rubatsiro rwobva rwauya. Angave anogona nezvemaoko, angave munhu ari bright kuchikoro, zvese zvinobatsirika along those lines.”
VaPardon Gonorashe mushandi wehurumende ane hunyanzvi hwekubatsira veruzhinji, kunyanya vanotambura kuti vave neraramo iri nani.
Vanoti vabereki vevana vane autism vanofanira kuve padyo nepavanowana ruzivo pamusoro pe autism.“Saka paida kuti patange pawanikwa centre yekuti vanhu vari kumaruwa, vangadai vari kuBinga, Muzarabani kana kuti kuMberengwa vakaona kuti vane vana vane autism they can refer vana ivavo kuno.” Vatizve,“Tikashevedza ma parents vari kumaruwa vanogona kuuya kuma campaign akaita seaya.”
VaGonorashe vanoti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda gore rega rega kuzvirongwa zvakanangana ne autism.
“Hakuna zviri kunyanya kuitwa about disability as a whole.” Vatizve, “Then mukazopinda mudisability sector imomo munozoona kuti autism is relegated kuzasizasi kune other forms of disability. Saka ngatitorei disability sector se ine mari shoma mu budget. Then yapihwa mari shoma already, autism iri kuzasizasi zvekuti ikoko kunosvika one cent. Ndosaka kune vanhu vashomanana vari kutari nezve autism as a right.”
Sangano guru rezvehutano pasi rese reWorld Health Organisation rinoti pavanhu zana nemakumi matanhatu ega ega mumwechete wavo anenge aine autism.
Vamwe vanhu vane autism vanokwanisa kuzviriritira asi vakawanda vavo vanotozoda kuchengetwa hupenyu hwavo hwese.
Sulumani Chimbetu Oronga Kuenda kunoridza naTongai Gwaze kuBritain
Muuto weMuchadenga Anovharirwa Muchitokisi Achipomerwa Mhosva yeKuuraya